मध्यपहाडी लोकमार्ग : जताततै पहिरो जानाले यात्रुलाई सास्ती ! गल्कोटको अम्रिसे खोल्सामा आएको पहिरोले मध्यपहाडी लोकमार्गको आवागमन ठप्प ! – ebaglung.com
२०७६ श्रावण ७, मंगलवार १०:०२	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
मित्रलाल खरेल, गल्कोट २०७६ साउन ७ । आज विहान ७ बजे गल्कोट नगरपालिका वडा नं ७ र ९को बीचमा रहेको अम्रिसे खोल्सामा आएको पहिरोले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध बनेको सहकर्मी शिशिर मल्लले जानकारी दिएका छन । मध्यपहाडी लोकमार्गको शाखा सडकको रुपमा खनिएका मोटरबाटोबाट पहिरो गएर बेलबेलामा लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको छ । केहि दिन पहिले पनि सोही अम्रिसे खोल्सामा आएको पहिरो २२/२३ घण्टा लोकमार्ग अवरुद्ध बनेको थियो ।
अम्रिसे खोलामा गएको पहिरो । तस्वीर शिशिरबम मल्ल, गल्कोट ।
अहिले लोकमार्ग पुरै अवरुद्ध बनेको छ । बुर्तिवाङ तिरबाट छुटेका सवारी साधनहरु र बुर्तिवाङतिर जाने सवारी साधनहरु अम्रिसे खोल्सामा जाम परेका छन भने यात्रुहरुले सास्ती भोग्नु परेको अवस्थामा छ । पहिरो गएको ठाउँमा अहिले प्रहरी आईपुगेको स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको छ ।
यस्तोछ, अक्षेतेमा लोकमार्गको बेहाल । तस्वीर- भरत सापकोटा
गए राति लोकमार्गको बिहुँ खण्डमा ठाउँठाउँमा पहिरो गएको सहकमी भरत सापकोटाले जनाएका छन् । पहिरो जानेक्रम नथामिएमा लोकमार्ग अवरुद्ध हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।
बागलुङ जिल्लामा प्रयाप्त मात्रामा वर्षा नभएको अवस्थामा यस्तो हाल छ भने वर्षा भएको अवस्थामा के होला ? भन्ने प्रश्न उपभोक्ताहरुले उठाएका छन् ।
गल्कोट खण्डमात्र नभएर मध्यपहाडी लोकमार्गको निसी देखी बागलुङ सदरमुकाम सम्मको अवस्था राम्रो छैन । तुरतुरे पहिरो होस या अम्रिसे खोल्साको पहिरो, या बडीगाड राक्सेको भेल, या सदरमुकाम देखी काठेखोला अक्षेते हुँदै बिहुँको घोँडाबाँधे सम्म किन नहोस लोकमार्ग बेहाल अवस्थामा छ । लोकमार्गका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको केटाकेटी पनले समयमै आवश्यक निर्माण कार्य हुन नसकेको उपभोक्ताहरुको गुनासो रहेको छ ।
यी लिंकपनि पढौँ
पहिरो खसेर हिंजो साँझ ७ बजे देखी मध्यपहाडी लोकमार्ग अबरुद्ध, क्षतीपुर्ति माग्दै स्थानीय सडकमा !
अपडेट : लेदो सहितको पहिरोबाट अबरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग २१ घण्टा पछी सन्चालनमा !